Mining Industry CMC eji dị pelletizing nragide na mwute gị n'ụlọnga ke Ngwuputa ụlọ ọrụ. The raw pellet nke e ji CMC nwere ezigbo mgbochi gbawara arụmọrụ na elu nsogbu na-ada ike nke akọrọ na mmiri pellets. Ka ọ dịgodị, ọ nwere ike melite ọkwa nke pellets. Na pellet ngwa, CMC nwere ike ime ka o nwere ezi sphericity, nrụgide na-eguzogide, deformation eguzogide, ezi dispersion, elu ike nke mmiri pellet, elu mgbochi gbawara okpomọkụ, ike ike ịchịkwa na Asarel ...
CMC eji dị pelletizing nragide na mwute gị n'ụlọnga ke Ngwuputa ụlọ ọrụ. The raw pellet nke e ji CMC nwere ezigbo mgbochi gbawara arụmọrụ na elu nsogbu na-ada ike nke akọrọ na mmiri pellets. Ka ọ dịgodị, ọ nwere ike melite ọkwa nke pellets.
Na pellet ngwa, CMC nwere ike ime ka o nwere ezi sphericity, nrụgide na-eguzogide, deformation eguzogide, ezi dispersion, elu ike nke mmiri pellet, elu mgbochi gbawara okpomọkụ, ike ike ịchịkwa ma hapụ mmiri na pellet na ezi Metallurgical arụmọrụ.
Na sulfide flotation, CMC ike budata welie wettability nke talc granule na-aghọta flotation nkewa nke sulfide ore na talc.
CMC eji dị silicate gangue inhibitors ibelata ụzọ nkewa nke ọla kọpa na-edu ndú. Ma mgbe ụfọdụ ọ na-eji dị ka a dispersant nke slime.
The ụdị Ngwuputa ụlọ ọrụ: IP50 na IP100
Previous: asa ezé Industry